FAQs - Fampandrosoana siansa sy haitao GUODA (Tianjin) Inc.
Bisikileta GD-City / Urban Road
Bisikileta GD-Tour / Trekking / Cross Country
ACCESSORIES amin'ny bisikileta
Miovaova ny vidiny arakaraka ny vidinay sy ny tontolo iainana ivelany. Azafady mba mifandraisa aminay mba hidirana amin'ilay pricelist farany sy fanazavana fanampiny.
Manana habetsahan'ny kaomandy farafahakeliny ho an'ny baiko iraisam-pirenena izahay, saingy ny isa marina dia tsy miorina miankina amin'ny karazana bisikileta tadiavinao. Na izany aza, mbola azo ekena ihany izany raha mila habetsahana kely kokoa amin'ny antsinjarany ianao. Mifandraisa aminay fotsiny mba hahazoana fampahalalana bebe kokoa momba ireo bisikileta kendrenao! Faly izahay mifandray aminao.
Orinasa fampiroboroboana ny siansa sy ny teknolojia GUODA (Tianjin)
Alahady ka hatramin'ny sabotsy
24 ora an-tserasera
Ho an'ny fangatahana momba ny vokatra na pricelist anay, azafady avelao ny mailakao aminay ary hifandray aminao izahay afaka 24 ora.